Kọlịflawa | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Esi na-eto eto kọlịflawa: iwu na ndụmọdụ
Na-eto eto na kọlịflawa n'ubi ndị na-eto eto anaghị adọrọ mmasị dị ka ndị na-eto eto ọcha. Ihe mere ọnọdụ a ji dịkwuo oke bụ enweghị ihe ọmụma nke ndị na-elekọta ubi banyere ikekwe ịmalite ịmalite ụdị kabeeji dị otú a na ọnọdụ dị jụụ na ihu igwe, na enweghị njikere iji osisi na-amaghi ama kpuchie ya.
Ghọta ụdị ụdị kabeeji
Ọ dịla anya ụmụ mmadụ maara kabeeji nke ọma na ọ bụ otu n'ime nri ndị kacha eri. Na okike, e nwere ihe karịrị iri ise nke ihe oriri a. Na ụdị ụdị kabeeji kachasị ewu ewu, a ga-ewepụta foto ha na aha ha n'isiokwu a. Nkọwa kachasị amara na-ewu ewu omenala anyị latitudes.
Na-eto eto na akwukwo nri dika akwukwo ozi oma adighi mfe n 'onodu ihu igwe anyi. Otú ọ dị, ịmara ọdịdị nke ilekọta ya na ịdebe teknụzụ niile dị mkpa maka ịkụ na-eto eto, ị nwere ike ịmasị onwe gị na ndị ị hụrụ n'anya nke kachasị mma ma dị mma. Nke kachasị mma nke kọlịflawa Kọlịflawa bụ ọgaranya na vitamin C, A, B, E, D, K, H, U na components dịka amino acid, carbohydrates, starch, fiber, pectins, organic acids, sugar sugars, proteins, polyunsaturated acids, biotin, purine ogige.
Kọlịflawa dị mma ma na-emerụ ahụ
Kọlịflawa bụ nri na-egbu egbu. Aha ya esiteghị na eziokwu ahụ ọ bụ agba, ma n'ihi na ọ na-agụnye inflorescences. A na-akpọkwa ya "ntụgharị", n'ihi na ụdị ụdị kabeeji a bụ nke pụrụ iche. Banyere uru nke kọlịflawa maka ahụ ruo ogologo oge adịghị arụ ụka, ya mere taa, ọ na-ewe ebe nsọpụrụ kwesịrị ekwesị na nri nri kwa ụbọchị.
Esi kwadebe kọlịflawa maka oyi
Ihe oriri kachasị mma na ubi anyị bụ kọlịflawa. Osisi ya ga-edozi efere ọ bụla, karịsịa mgbe e jikọtara ya na broccoli. Ọ dịghịdị mma ịkọ maka nnukwu uto na uru nke akwukwo nri a, n'ihi na ọ nwere ọtụtụ ihe bara uru karịa njikọ protin ya. Inwe ezi owuwe ihe ubi, achọrọ m idebe ya ogologo oge o kwere mee.
Esi kwadebe kọlịflawa na Korean maka oyi
Nri ụtọ nke ose kọlịflawa na-acha osere, nke dị ntakịrị uto na ịke Korean na-emeju anụ ma ọ bụ azụ azụ, n'ihi ya, mmadụ ole na ole ga-ajụ ịchebe ite nke salad a siri ike. A sị ka e kwuwe, ọ bụghị naanị na ọ tọrọ ụtọ, kama ọ bara uru: nchịkọta ihe ndị nwere ọtụtụ vitamin na anụ ọkụkụ, na iji kọlịflawa na-eme ihe mgbe niile na-etinye aka na nhalata, na-eme ka usoro nsị digestive na ọrụ obi, na-enyekwa maka igbochi kansa.